August 2010 | TechSectors
Gmail Labs Features for Everyone
3:35 AM LeaveaComment
အရင်တုန်းကတော့ Google ၏ ပြောင်းလဲမှုများ အကြောင်း မှာ ခုလိုဆက်ရေးဖို့ စိတ်ကူး မရှိဘူး - ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ Google က ခဏချင်း ခဏချင်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်တာ အရမ်းများလာလို့ သူပြောင်းလဲတိုင်းသာ Thread အသစ်ဖွင့်ရရင် မြင်မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပေါင်းရေး ဖြစ်သွားတာပါ။ ခုလည်း ဟိုတစ်နေ့က Google ကနေ improves လုပ်လိုက်တဲ့ "Undo Send" အကြောင်းလေး နဲနဲ ဖောက်သည်ချချင်လို့ - "Undo Send" ကိစ္စက တစ်ချို့လည်း သိပြီးသား ဖြစ်မယ် - တစ်ချို့လည်း အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်မယ် - Gmail မှာ "Undo Send" ရှိတယ်ဆိုတာ စာဖတ်ဖြစ်သူ တစ်ချို့နဲ့ Gmail Labs ထဲကို ဝင်ဝင်ကလိကြလေ့ ရှိတဲ့သူ တော်တော်များများ သိပါတယ်။
မယဉ်ပါးသေးသူ တစ်ချို့ အတွက် "Undo Send" က ဘာလဲ ဆိုတာ ပြန်ပြီး နဲနဲ ရှင်းပြရရင် ကျွန်တော်တို့ စာတစ်စောင် Gmail ထဲမှာ Compose လုပ်လိုက်တဲ့ အခါ နောက်ဆုံး စာတွေ ဘာတွေ ရေးပြီး သွားရင် တစ်ချို့က ပြီးပြီကွ ဆိုပြီး ချက်ချင်း တန်း Send လုပ်လိုက်ကြတယ် - နောက် ၃ - ၄ စက္ကန့် လောက် နေတော့မှ ဟာာ " ငါ Attach Files တွဲဖို့ မေ့သွားပြီတို့" - " ဟာကွာ ဟိုစာလေး ထပ်ပေါင်းလိုက်ရမှာတို့" - စသဖြင့် ပြန်သတိရပြီး အားမလို အားမရနဲ့ နောက်စာတစ်စောင် ထပ်ရေးရတာမျိုးတွေ မကြာခဏ ရှိခဲ့ကြပါတယ် - ရှိလည်းရှိဖူးကြမှာပါ - အဲလို ပြဿနာမျိုး မဖြစ်အောင် - Gmail ထဲမှာပါတဲ့ "Undo Send" က အကူအညီ ပေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အလောသုံးဆယ်နဲ့ Send ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးပြီးချင်း စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းမှာ ကိုယ်တစ်ခုခု အဲ့စာမှာ ထပ်ဖြည့်ဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတာ သတိရရင် ဒီ Undo send ကို နှိပ်ပြီး ချက်ချင်း ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က ကိုယ်ပို့ချင်သူဆီ ချက်ချင်း မပို့တော့ပဲ ပြန်ပြင်လို့ ရတာမျိုး ပေါ့ -
ဒီ Features မျိုးတွေ ရှိနေတာ ကြာပါပြီ - ဒါပေမယ့် တနေ့က စပြီး ပြောင်းလဲ သွားတာ တစ်ခုက အရင်တုန်းက "Undo Send" ဆိုတာ ကိုယ်က Send လုပ်လိုက်ပြီး5seconds အတွင်းပဲ သတိပြန်ရခွင့် ရှိပါတယ်။ ပြောချင်တာ5seconds ကျော်ပြီးမှ " ဟာကွာ - .. " လုပ်လို့ မရပါဘူး - ပို့ပြီး သွားပါပြီ - ခုတော့ Google က အဲတာလေး ကို နဲနဲ ပြင်ထားပါတယ်။ အရင်က5seconds ဆိုပေမယ့် ခု စက္ကန့် ၃၀ ထိတိုးသွားပါပြီ - ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာ အောက်မှာ ဖော်ပြသွားပါမယ်။ ( နည်းပညာတွေများ တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ ထွက်လိုက်တာ အသစ်အဆန်းချည်း လိုက်လေ့လာတဲ့ သူတောင် မနည်းလိုက်နေရတဲ့ အခြေအနေမှာ ဖော်ထုတ်တဲ့ သူတွေ - ပြင်ဆင်တဲ့ သူတွေ ဘယ်လို အတွေးတွေနဲ့များ ဖော်ထုတ်ပြင်ဆင်နေကြတယ် ဆိုတာ မတွေးတတ်လောက်အောင်ပါပဲ။ )
အရင်ဆုံး ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Gmail Labs Features ရှိတဲ့ နေရာကို သွားပါမယ်။
နောက် အဲ့ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Gmail Labs Features တွေရဲ့ ကြားက ဒီကောင်ကို ရှာပြီး Enable ပေးပါ။
အားလုံးပြီးသွားရင် ဟိုးအောက်ဆုံးက Save Changes ကိုပေးပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ် Enable လုပ်ထားတဲ့ Undo send ကို မိနစ်အပိုင်းအခြား ကန့်သတ်ပါမယ်။ ဘယ်နမိနစ်မှ ကိုယ်မေ့နေတာ ပြန်သတိရတတ်လဲ - စဉ်းစားပါ - အဲတာကတော့ ကိုယ့်ပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ် - ( မေ့တတ်သူများသီးသန့် ) အဲလို သတ်မှတ်ပေးဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ Gmail Settings နေရာကို သွားပါ။
အဲ့နောက်မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ပေးချင်သလောက် ပမာဏကို ထားလိုက်ပါ - အများဆုံးရတာကတော့ 30 seconds ပါ။
ဒါဆိုရင် နောက်တစ်ခါ စာပို့တဲ့ အခါ Undo ပြန်လုပ်မလုပ် သူက စက္ကန့် ၃၀ စောင့်ပြီးမှ စာပို့ပါလိမ့်မယ်။
"Undo Send" အကြောင်းကတော့ ဒီမှာတင် ပြီးပါပြီ - ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်း ပြောရတာ သိပ်အားမရသေးလို့ နောက်ထပ် Gmail Labs Features ထဲက ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ Features လေးတစ်ချို့ အကြောင်း အသုံးမပြုဖူးသူတွေ သိရှိအောင် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။
သူကတော့ ကိုယ့် Gmail ထဲကို Picasa က links တစ်ခုခု အသိမိတ်ဆွေတွေက ပို့လိုက်တဲ့ အခါ Mail ထဲမှာတင် Preview ကြည့်လို့ ရတဲ့ Feature တစ်ခုပါ။ Enable ပေးရမယ့် နေရာကိုတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ အဆင့်အသီးသီး အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Mail တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အမြန်ကူးကြည့်ချင်ရင် - ကျွန်တော်တို့မှာ ပုံမှန်အတိုင်းဆို လက်ရှိကြည့်နေတဲ့ Mail ကနေ Mail box ကို နောက်ပြန်ထွက်ထွက်နေရပါတယ် - တကယ်လို့ ဒီ Feature On ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိကြည့်နေတဲ့ Mail ကနေပဲ နောက် Mails တွေဆီကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကူးသွားလို့ ရပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ Mail ကနေ နောက် Mail တစ်ခုကို Right click နှိပ်ပြီး ဘယ်ညာသွားလိုက်ရင် နောက်စာနဲ့ ရှေ့စာကို Inbox ခံပြီး ပြန်စရာမလိုပဲ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
On ရမှာတော့ ဒီကောင်ပါ -
နောက်တစ်ခု သဘောကျတာက စာထဲမှာပုံပါ တစ်ခါတည်း တွဲလို့ ရတဲ့ကောင်လေး -
အဲတာကို On ပြီးရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွဲလို့ ရပါပြီ -
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် သဘောကျမိတာပါ Message Preview ပါ -
သူ့ကို On ထားရင် Inbox ထဲ ဝင်ပြီး ကြည့်စရာ မလိုပဲ အပေါ်ယံကနေ ဘာရေးထားတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ရှပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ဒီကောင်က စာတွေ အများကြီး ထဲမှာ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ စာကို တစ်ခုချင်းဆီ လိုက်ဖွင့်မနေ တော့ပဲ တစ်စောင်ချင်းစီ အပေါ်ယံ ရှပ်ကြည့်ပြီး ရှာတဲ့ နေရာမှာ အသုံးတည့်ပါတယ်။
ဘယ်လို မြင်ရတာလဲ ဆိုတာ ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Gmail Labs Features တစ်ချို့ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ - နောက်ထပ် အများကြီး ကျန်ပါသေး တယ် - စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကို မပျက်မကွက်သွားရောက် စမ်းသပ်ကြပါကုန် -
Simple Ways to Block Adult Sites
8:06 PM LeaveaComment
ပြောရမှာ အားလည်း နာပါရဲ့ - မျက်နှာလည်း ပူပါရဲ့ - ဒါပေမယ့် မပြောမပြီး မတီးမမြည် - မသွားမရောက် - မစားမဖြစ် ဆိုသလို - ဝေမျှစရာလေး ပေါ်လာတော့ ပြောရပါဦးမယ် -
မြန်မာနိုင်ငံကနေ အင်တာနက် သုံးတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီကိစ္စကို သိပ်သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး - နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ - စာသင်နေတ့ဲ သူတွေ လောက်ပဲ တော်တော်များများ သတိထားမိကြမယ် ထင်တယ် - အဲတာက +18 ကိစ္စပါ - ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အင်တာနက် သုံးတယ် - Google ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြား Search Engine တစ်ခုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု သိချင်လို့ ရှာလိုက်ပြီ ဆိုရင် websites ပေါင်းများစွာ တန်းစီပြီး ကျလာတယ် - websites တွေ အများကြီး တန်းစီ ကျလာတာ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတာတော့လည်း မကောင်းဘူး - အဲဒီ့ မကောင်းတဲ့အချက်က Adult Sites တွေပါပါလာတတ်တာ - Adult Sites ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်ထပ်ပြီး ရှင်းပြဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး - အားလုံးနားလည် ပြီးသား ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် - ဒီ Adult Sites တွေပါလာတတ်တဲ့ ပြဿနာက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဆိုရင်တော့ +18 အထက်ဆို ပြဿနာ တစ်ခု အနေနဲ့ ဘယ်သူမှ မရှုမြင်ကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ယဉ်ကျေးမှု အရပဲ ကြည့်ကြည့် ဘယ်ရှု့ထောင့်ကနေ ကြည့်ကြည့် +18 မကလို့ over 30 ကျော်နေလည်း ကြည့်မကောင်းပါဘူး -
ကျွန်တော်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး - လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် - လူယဉ်ကျေးစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှု ဆိုင်ရာ ပညာပေး ဆိုတာကတော့ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ် - သိလည်း သိထားအပ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် Adult Sites ဆိုတာတွေ တော်တော်များများက မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှု ဆိုင်ရာ ပညာပေး မဟုတ်ပဲ လိင်မှု ဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေရေး Websites တွေ ဖြစ်နေကြတာ များပါတယ် - အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ရောက်သူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်ဟာမှန်တယ် ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာ ချင့်ချိန်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သားသမီးတွေ - မောင်နှမတွေ - ခုမှ အင်တာနက် ကို စတင်သုံးစွဲသူတွေ - အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အတွက်ကျတော့ Adult Sites တွေကို အင်တာနက်ထဲမှာ လည်ရင်း ပတ်ရင်း တွေ့ရှိသတိထားမိသွားရင် မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှု ဆိုင်ရာ ပညာပေးရှု့ထောင့် ဆိုတာကို သတိမထားမိတော့ပဲ လိင်မှုဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေရေးပိုင်းမှာ သာယာသွားမှာ - စမ်းသပ်ချင်မှာ စိုးရိမ်ရပါတယ် - အဲ့စိတ်က ယောကျာင်္းလေးမှာ ဖြစ်လည်း မကောင်းသလို - မိန်းကလေး တစ်ယောက်မှာ ဝင်သွားရင်လည်း မကောင်းဘူး
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ပြောချင်တာကလည်း ဒီအကြောင်းပါပဲ - အဲတော့
လူငယ်တွေ အတွက် မသိအပ် မမြင်အပ်တဲ့ Adult Content တွေကို အင်တာနက်ထဲ လည်ပတ်ကြည့်ရှုတဲ့ အခါ ပါမလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ??
တစ်ချို့ဆို နိုင်ငံခြားမှာ မိသားစုလိုက် ပြောင်းနေကြတဲ့ သူတွေရှိတယ် - သူတို့မှာ သားတွေ သမီးတွေ - မြေးတွေနဲ့ အိမ်မှာ အင်တာနက်ကလည်း လက်တကမ်းမှာ ခုလို အခြေအနေမှာ ကလေးတွေ အနေနဲ့ အင်တာနက်ထဲ လည်ပတ်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ တစ်နေ့ မဟုတ် တစ်နေ့ Adult Content တွေကို တွေ့မှာပဲ - ဒါက မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲဘူး -
ကျွန်တော်တို့တွေ ဆိုတာလည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကိုယ့်သားသမီးနားထိုင်ပြီး သူတို့ ဘာကြည့်နေလဲ ဆိုတာ ထိုင်စစ်နေရ လောက်အောင် မအားဘူး - ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် - ဒီလို အခြေအနေမှာ အင်တာနက်ထဲကနေ ပါပါလာတတ်တဲ့ Adult Sites တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရပြီ - ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးသလောက် နည်းလမ်းတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ Software တွေသုံးတာ Trick တွေ လုပ်တာ - စသဖြင့် မျိုးစုံအောင် ရှိပါတယ်။
ဥပမာ ပြောရရင် ကျွန်တော့် သားတွေ သမီးတွေ YouTube မှာ ကာတွန်းကား ကြည့်တယ် ဆိုပါစို့ -
YouTube ထဲမှာ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ Adult Content တွေ သူတို့ တွေ့မသွားနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောလို့ မရဘူး - အဲလို အခြေအနေမျိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ် ပေးထားနိုင်ဖို့ Google ကနေ security filter တစ်ခု ထည့်ပေးထားတာ ရှိတယ် - http://www.youtube.com/ ကို သွားရင် ဟိုးအောက်ဆုံးလေးနားမှာ ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Default အနေနဲ့တော့ သူက Off ထားပါတယ် အဲ့ဒီ Off ဆိုတာ Click ပေးလိုက်ရင် Choose your safety mode ဆိုတာ ပေါ်လာပြီး On လုပ်နိုင်ဖို့ Sign in ဝင်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် - Youtube က Google Account ရှိရင် Sign up ထပ်လုပ်စရာ မလိုတာ မို့လို့ Google acc နဲ့ Sign in ဝင်ပြီး Safe လိုက်လို့ ရပါတယ် - အဲလိုဆို security filter ကနေပြီး Adult Content တွေကို Search Result တွေမှာ မပါဝင်အောင် စစ်ထုတ်ပေးသွားမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီ security filter ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး စစ်ထုတ်နိုင်မှုတော့ မရှိပါဘူး - ကျွန်တော် စမ်းသပ်ကြည့်သလောက်တော့ security filter - On ထားရက်နဲ့ကို ခုလို ကားမျိုးတွေက Search Results မှာ ပြနေပါသေးတယ် - ဥပမာ ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။ ပုံရဲ့ ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ Safety mode: on ထားပေမယ့် မြင်ရတာကတော့ တွေ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ :D
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီ Adult Content ပါတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်ပြီး ဒီ့ထက်ပို Security မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်ပါပြီ - အဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေမဟုတ်ရင်တောင် အကောင်းဆုံးနီးပါး ဖြစ်နိုင်မယ့် ကာကွယ်နည်းကို ကျွန်တော် သိခဲ့ပါတယ်။ အဲတာကတော့ OpenDNS ကို အသုံးပြုဖို့ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ စကားစပ်မိလို့ OpenDNS က ဘာလဲ - သူ့ကို ဘာလို့ ကျွန်တော်တို့ သုံးသင့်လဲ ဆိုတာ knowledge တစ်ခု အနေနဲ့ သိရှိနိုင်အောင် အကျဉ်းမိတ်ဆက်ပေးရရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာကနေ Browser တစ်ခုခုက address bar မှာ URL တစ်ခုခု ( www.yahoo.com ) စသဖြင့် ရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ဒီ URL ကို လိုက်ပြီး ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရမှန်း နားမလည်ပါဘူး - အဲတော့ သူ့မှာ DNS server ကို လှမ်းမေးရတယ် - DNS server ဆိုတာက လူတွေရိုက်ထုတ်ခိုင်းစေလိုက်တဲ့
( www.yahoo.com ) ကို ကွန်ပြူတာ အချင်းချင်း ဖတ်တတ်အောင် ဒါကတော့ IP address (209.131.36.158) ဖြစ်တယ် - မင်းသွားရမှာ အဲ့ကို ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ပေးတယ် - ဒါက သူ့အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို IP address (209.131.36.158) ကိုသိတဲ့ အချိန်ကျတော့မှ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာ သက်ဆိုင်ရာ website နဲ့ ချိတ်ဆက်မိပြီး Webpage တွေကို ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ ဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာပဲ OpenDNS က ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Router - Computer နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်တာနက်ကို သုံးစွဲတဲ့ အခါမှာ Adult Content တွေ မလိုလားအပ်တဲ့ Websites တွေ မပါဝင်လာအောင် configuration လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့လိုမျိုးပဲ မလိုလားအပ်တဲ့ Sites တွေကို ကလေးတွေရဲ့ အင်တာနက် activity ပေါ်ကြည့်ပြီး လိုအပ်တာကို Block ပေးမယ့် Programs ( ဥပမာ NetNanny ( $ 39.99 ) ... ) ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲလိုနည်းမျိုး မသုံးချင်လည်း နောက်ထပ် Geek ကျတဲ့ နည်းတွေ ကျန်ပါသေးတယ် - ဥပမာ ပြောရရင် 127.0.0.1 trick လို့ ပြောလို့ ရတဲ့ နည်းတစ်မျိုးပါ - အဲ့နည်းကလည်း Websites တွေကို ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ Block တဲ့ နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ -
အဆင့် ( ၁ ) - Start > Run ကိုသွားပြီး Run box မှာ c:\_WINDOWS\_system32\_drivers\_etc\_hosts ကို ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
အဆင့် ( ၂ ) - notepad တစ်ခု ပွင့်လာပြီ ဆိုရင် အောက်ဆုံး - နောက်ဆုံးစာကြောင်းကို သွားပါ - ရောက်ရင် Enter တစ်ချက်ခေါက်ပြီး ကိုယ် Block ချင်တဲ့ Sites တွေ ဖော်ပြပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆင့် ( ၃ ) အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးရင် Save လုပ်ပြီး Exit လုပ်ပါ။
ဒီလိုဆို အပေါ်က ဆိုဒ်တွေ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ ဘယ်လိုမှ ဖွင့်မရတော့ပါဘူး - ဒီနည်းအတိုင်း ကိုယ့် Block ချင်သမျှ Site အကုန် Block လို့ ရပါတယ်။ ( Unblock လုပ်ချင်ရင် အဲ့ဖိုင်ကိုပဲ ပြန်ဖွင့်ပြီး ခုနက ရိုက်ခဲ့တဲ့ စာကြောင်းတွေ ဖျက်လိုက်ယုံပါပဲ ) ဒါပေမယ့် ဆိုးတာ တစ်ခုက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ပြန်ဆက်ရရင် internet ထဲမှာ Adult Sites ဆိုတာ ရေတွက် မကုန်နိုင်ဘူး - ကျွန်တော်လည်း အကုန်မသိနိုင်ဘူး - မိသားစုဝင်တွေလည်း အကုန်သိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး - အဲတော့ ဒီနည်းနဲ့ ကာကွယ်ရင် ကိုယ့် Block လုပ်မထားပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ Sites တစ်ခုခု ကိုယ့်ကလေးက တစ်နေ့ မဟုတ်တစ်နေ့တော့ တွေ့မှာပဲ -
အဲ့အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေကတော့ OpenDNS က Service တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ FamilyShield ကို ပြောင်းသုံးဖို့ပါ။ လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့် ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Youtube ကို ကြည့်မရဘူး ဆိုသူများ ဒီနေရာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ရမှာ DNS server entries ကို Change ပေးဖို့ပါ အဲလို လုပ်ပြီး Save လိုက်တာနဲ့ အားလုံး activated ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဆင့်ချင်းစီကို ပုံနဲ့ ဖော်ပြသွားပါဦးမယ် -
အဆင့် ( ၁ ) - Control Panel ကိုသွားပါ။
အဆင့် ( ၂ ) - Network and Sharing Center ကို ဝင်ပါ။
အဆင့် ( ၃ ) - Active ဖြစ်နေတဲ့ Network အောက်က Local Area Connection ကို Click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၄ ) - Properties ကို ဝင်ပါ။
အဆင့် ( ၅ ) - Internet Protocol Version -4ကို သွားပါ။
အဆင့် ( ၆ ) - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း DNS Sever Settings ကို ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ်က ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Router ကို FamilyShield သုံးပြီး ကာလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ adult content တွေပါသမျှ Websites တွေ အားလုံးကို ကိုယ့်အိမ်က ကွန်ပြူတာတွေ အားလုံးမှာရော mobile phones တွေမှာပါမကျန် ကိုယ့် အိမ် network ထဲက အရာမှန်သမျှကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Block လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့ထက် လွယ်တဲ့နည်းတော့ မရှိတော့ပါဘူး - တကယ်လို့ Router ကို Configuration လုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအောက်က Video ကိုကြည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော် အခု ဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို Adult Sites တွေ Block ဖို့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အထိုက်လျောက် နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မိသားစုအားလုံး ချမ်းမြေ့သာယာတဲ့ ဘဝများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
Using System Restore in Windows7and Vista
4:05 AM LeaveaComment
Originally Posted by arkaraung
ကျွန်တော့W7မှာ ဒီနေ့မှ ပြသနာပေါင်းစုံပေါ်နေပါတယ် အကိုတို့ရေ ကူညီကြပါအုံး...
ကွန်ပြူတာစစဖွင့်ချင်းပဲ ePowerTray has stopped working windows can check online forasolution to the problem. check online forasolution and close the program close the program အဲဒီလိုပေါ်လာပြန်တယ်ဗျာ မိသားစုကအကိုတွေကို မေးအုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ snipping toolလေးကိုခေါ်ပြီ ပုံလေးနဲ့မေးမယ်လုပ်တော့ the snipping tool is not working on your computer right now.restart your computer, and then try again. if the problem persists, contact your system administrator. အဲဒီလိုပေါ်လာပြန်ကော နောက််ပြီးတော့ အသံပြသနာကလာသေးတယ် ဂျီတော့မှာလဲ အသံကမလာ သီချင်းဖွင့်ရင်တော့ အသံလေးများလာမလာဆိုပြီး သီချင်းဖွင့်တော့လဲ ဘယ်သီချင်းမှဖွင့်လို့မရ window media player ကလဲ ဖွင့်လိုက်ရင် closeဆိုတာကြီး ပဲပေါ်လာတယ် real playerနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြန်တော့လဲ out of memory. you may need to close some other applications to play this content. အဲဒီလိုမဖြစ်ခင်တော့ မှတ်မှတ်ရရ BearShareဆိုတဲ့ media software တခုကို install လုပ်ပြီးတော့မှ ဖြစ်သွားတာပါ. bearshare ကိုလဲ uninstall လုပ်ပြီးသွားပါပြီ.... အခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ကူညီကြပါအုံး..
စကားဝိုင်းထဲမှာ ပြောပြောနေတာတော့ တွေ့မိတယ် - အဆင်ပြေနေပြီ ထင်လို့ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ ဝင်မပြောလိုက်တာ - ပုံစံကြည့်ရတာ အခြေအနေက တော်တော်လေး ဆိုးနေတယ် ထင်မိတယ် ( မျက်စိရှေ့မှာ မြင်ရတာ မဟုတ်တော့ အတိအကျတော့ မခန့်မှန်း နိုင်ဘူးပေါ့ )
ကောင်းတာကတော့ Windows ကို Fresh Install လုပ်လိုက်တာ ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် အလွယ်နည်း System Restore ပြန်ခေါ်လို့လည်း ရပါတယ်။ System Restore Points တွေ ရှိနေမယ် ဆိုရင်ပေါ့ - လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။
Windows7သို့မဟုတ် Windows Vista တွင် System Restore လုပ်ဆောင်ခြင်း
Windows7ဒါမှမဟုတ် Windows Vista မှာ software - drivers စတဲ့ အသစ်တစ်ခုခုကို install လုပ်လိုက်တိုင်း registry နဲ့ system files တွေကို အလိုလျောက် Backup လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ feature တစ်ခုပါပြီး သူ့ကို ကျွန်တော်တို့က System Restore လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူက ဘာကောင်းလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်မသိတဲ့ Software တစ်မျိုးမျိုးကို မှားယွင်း installed လုပ်ဆောင်မိပြီးကာမှ System မတည်မငြိမ် ဖြစ်လာရင် အရင် Software install မလုပ်ခင်က အခြေအနေကို ပြန်ခေါ်ပေးနိုင်တဲ့ Feature မျိုးပါ။ အဲလို System Restore Feature ကို သုံးပြီး System တစ်ခုလုံးကို Restore လုပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာကလည်း လက်ရှိ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတာတွေ ပျောက်ပြီး အရင်လို Stable ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ။
System Restore အား အသုံးပြုခြင်း
System restore feature ကို ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ နေရာ နှစ်နေရာ ရှိပါတယ်။ တစ်နေရာက Start menu search box ကနေ restore လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ System Restore ကို Start menu ရဲ့ ထိပ်မှာ ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုမှ မဟုတ်လည်း Search box မှာ search box မှာ rstrui လို့ ရိုက်ပြီး enter ပေးပါ - ဘယ်နည်းကို သုံးသုံး ရပါတယ်။
အဲလို ရိုက်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ အရင် restore point ကို ပြန်ခေါ်လို့ ရမယ့် Screen တစ်ခုချက်ချင်း ပေါ်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲကနေ သူဖော်ပြထားတဲ့ Recommended restore point ကိုပဲ ရွေးထားပေးပြီး next နဲ့ ဆက်သွားပါ - တကယ်လို့ ကိုယ်က သူပေးထားတဲ့ Recommended restore point ကို မရွေးပဲ တစ်ခြား restore point တစ်ခုခုကို ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်နှစ်သက်ရာ restore point ကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြား restore points တွေ ရှိနေမယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံမျိုး ဆင်တူ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ( စာလုံးတွေတော့ မတူနိုင်ပါ ) အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံအရ နောက်ဆုံး install လုပ်ခဲ့တာ Virtual CloneDrive ဖြစ်ပြီး သူ့မတိုင်ခင်က NVIDIA drivers installed လုပ်ခဲ့တာပါ - ဆိုလိုတာက ဒီနေရာမှာ ကိုအာကာအောင် လည်း ဒီသဘောကို နားလည်ရပါမယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ - ကိုအာကာအောင်က Software တစ်ခုခု တင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ Windows မှာ Error တက်တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Restore ပြန်လုပ်ရမှာ အဲ့ဒီ့ Software မလုပ်ရသေးခင်က restore point ကို ပြန်ခေါ်ပြီး System Restore ပေးရမှာပါ။
အဲလို သေသေချာချာ စီစစ် ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြီ ဆိုတော့မှ သူတို့ထဲက တစ်ခုကို Click ပေးလိုက်ပါ။ အဲနောက်မှာ လုပ်ဖို့ သေချာပြီ ဆိုတာကို confirm ပေးရပါမယ်။ အဲ့နောက်မှာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို အရင် အခြေအနေရှိရာဆီ ပြန်ခေါ်သွင်းဖို့ restart ပေးပါ။
မှတ်ချက်: System Restore လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်စက်ကို အရင်လို အကောင်းဆုံးအခြေအနေ ပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ အလုပ်သင့်ဆုံးက System Restore ကို safe mode ထဲကနေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်က safe mode ထဲကနေ မလုပ်ပဲ Windows ထဲကနေ လုပ်လိုက်လို့ Restore လုပ်နေစဉ်အတွင်း Error တက်လာရင် safe mode ထဲကနေ ပြန်ပြောင်းဝင်ပြီး လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ Safe mode ထဲကို ဝင်ဖို့ကတော့ Reboot ပေးပြီး Windows ပြန်စစတက်လာချင်းမှာ F8 နှိပ်ထားရပါမယ်။ အဲကနေ Safe Mode ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ F8 key ကိုနှိပ်တယ် အလုပ်မလုပ်ဘူး ဆိုရင် safe mode ထဲကို ဝင်ဖို့ အောက်ဖော်ပြပါနည်းနဲ့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
( ၁ ) Start Button ကို click ပါ။
( ၂ ) Search box မှာ “msconfig” လို့ ရိုက်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
( ၃ ) အဲလိုလုပ်လိုက်ရင် “System Configuration” window ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
( ၄ ) “Boot” tab မှာ ရှိတဲ့ Boot Options section ကို သွားပါ။
( ၅ ) အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း “Safe Boot/Minimal” Check box မှာ check ပေးပါ။
( ၆ ) ပြီးရင် Restart ပေးပါ။
အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီး ကိုယ်လုပ်ဆောင်စရာ ရှိတာ လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ “msconfig” ကနေ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြန်ဝင်ပြီး “Safe Boot” box မှာ uncheck ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှ Boot Process က Normal ပြန်ဖြစ်မှာပါ။
အကယ်၍ Boot မရဘူး ဆိုလျှင်
တကယ်လို့ Boot လုပ်ပြီး Safe mode ထဲ ဝင်တာ ဝင်မရ ဖြစ်နေရင် Windows installation dvd ကိုထည့်ပြီး အဆင့်လိုက်ဆက်သွားရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်း အောက်နားမှာ ပေါ်လာမယ့် “Repair your computer” option ကနေ ဝင်ရောက်ပြီး ပြင်ဆင်လို့ ရပါသေးတယ်။
တကယ်လို့ installation dvd ဒါမှမဟုတ် repair disc မရှိရင် Windows7/ Vista Recovery CD ကို ဒီနေရာကနေ Download ချလို့ ရပါတယ်။
အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် “Repair your computer” option ကနေ ဝင်သွားပြီး System Restore ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း မြင်နေရတဲ့ နေရာကနေ ရွေးပေးရပါမယ်။
ခဏစောင့်လိုက်ရင် Windows ထဲမှာ ကျွန်တော်တိုက မြင်ခဲ့ရတဲ့ အတိုင်း အခုလိုပုံမျိုး ပြန်မြင်ရပြီး အဲ့ကနေ System Restore ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားလို့ ရပါပြီ။
အဲကနေ next ကိုဆက်သွားပြီး နောက် screen မှာ ကိုယ် Windows7ဒါမှမဟုတ် Windows vista တင်ထားတဲ့ Drive ကို ရွေးပေးရပါမယ်။
အားလုံး ပြီးသွားရင် Finish ပေးပါ။ ဒါဆို ကိုယ့် Windows က အလိုလို restore point ကနေ ဟိုးအရင် Stable ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကို ပြန်ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆင်မပြေရင်တော့ Windows သာ အသစ်ပြန်တင်လိုက်ပါ ကိုအာကာအောင် - ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ အကြံဉာဏ်ကတော့ ဒါအကုန်ပါပဲ
Some Pictures from howtogeek.com
3:49 AM LeaveaComment
ဒီနေ့တော့ မနက်ပိုင်းက သိပ်မအားတာနဲ့ ညနေပိုင်းလေးမှ စာလိုက် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေကတော့ ထူးတယ်ဗျို့ - Linux သမားတွေ Ubuntu သမားတွေအတွက်တော့ ပိုတောင်ထူးတယ်လို့ ပြောရမယ် - အဲ့သီတင်းကတော့ -
ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ မျှော်လိုက်ရတဲ့ Gmail Voice နဲ့ Video Chat - အခု Linux မှာ သုံးလို့ ရပါပြီ တဲ့ Ubuntu မှာတင်မက တစ်ခြား Debian-based Linux distributions တွေမှာလည်း သုံးလို့ ရပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
အသုံးပြုချင်သူများ Gmail.com/videochat ကိုသွားရောက်ပြီး Plugin ကို Download ချနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ထားတာကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် .deb package နဲ့ပါဗျာ ကဲ ! ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်လဲ :D
ကျွန်တော်တို့ စောင့်နေတာလည်း ကြာပြီ - သူများတွေ Mac တို့ Windows တို့မှာ ဒီဟာက သုံးနေတာ အိုသေတော့မယ် Linux user တွေ သုံးမရနိုင်လို့ ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်တောင် ခက်ခဲနေလဲ ဆိုပြီး သိချင်နေတဲ့ အဖြေကိုလည်း ဒီနေ့ သိလိုက်ရပါတယ်။
Google မှာ engineer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Justin Uberti ရဲ့ Linux နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း ပြောကြားသွားတာကတော့ -
" ကျွန်တော်တို့ ဒီ Release မှာ ရုပ်သံပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အသစ်စက်စက် အားလုံးကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ နည်းပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး 64 bit မှာပါ သုံးနိုင်ဖို့ နဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ Webcam တွေ အားလုံးနဲ့ပါ အရံသင့်သုံးနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Windows နဲ့ Mac versions တွေမှာလိုမျိုး Feature အပြည့်အစုံနဲ့ သုံးနိုင်အောင် အသေးစိတ် ပြင်ဆင် နေခဲ့ရလို့ ကျွန်တော်တို့ အချိန်တွေ အများကြီး ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ Google Voice နဲ့ Video က Desktop platforms အားလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ မို့လို့ အရမ်းကို ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေမိပါတယ် " လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
သူတို့ကို ကျွန်တော် ပြောချင်တာကလည်း ဘာလောက်ပဲကြာကြာ ခုသုံးရပြီ ဆိုတော့ - ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ - အရမ်းလည်း ပျော်ပါတယ် - ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်လို့။
Boomerang for Gmail Beta (0.1)
ဒီနေ့တော့ အားတဲ့ အချိန်လေး အင်တာနက်ထဲ စာလိုက်ဖတ်ရင်း တွေ့မိခဲ့တဲ့ Extension လေး တစ်ခုအကြောင်း မျှဝေချင်ပါတယ်။ Extension ဆိုပေမယ့် သူက လောလောဆယ်မှာ Beta အဆင့်ပဲ ရှိသေးတာ မို့လို့ Browser တိုင်းသုံးလို့ မရသေးပါဘူး - လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ Chrome နဲ့ Firefox မှာပဲ Extension တွဲလို့ ရပါသေးတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ Boomerang ပါ -
Boomerang က ဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဆီကို တစ်နေ့ နဲ့ တစ်နေ့ Emails တွေ ရောက်လာတာ ရှိတယ် - တစ်ခါ တစ်လေ ကိုယ်က Emails ပြန်ပို့ ရတာရှိတယ် - အဲလို အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ - ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ဆီကို Emails တစ်ခု ရောက်လာတယ် - အကြောင်းအရာက နောက်တစ်ပတ် " .... " အချိန် " ..... " နေရာမှာ မိတ်ဆုံစားပွဲ ရှိတယ် - တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြားပါတယ် - စသဖြင့် ဖိတ်ကြားချက် Mail တစ်စောင် ဆိုကြပါစို့ - လောလောဆယ် ကျွန်တော်က ဒီ သီတင်းကို သိတာ မှန်ပေမယ့် တကယ် ကျင်းပမယ့် မိတ်ဆုံစားပွဲ အချိန်က ဒီနေ့ကနေ စရေတွက်ရင် တစ်ပတ်တောင် လိုသေးတယ် - ဒီတော့ ကျွန်တော့်မှာ ကြားထဲ တစ်ခြား အလုပ်ကိစ္စတွေ ဘာတွေနဲ့ - သူ့ထက် သူ့ထက် အရေးကြီးတာတွေ ပေါ်လာပြီး တကယ်တမ်း နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်း ရောက်ရော အဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော် မိတ်ဆုံစားပွဲ သွားရမယ် ဆိုတာ သတိမရတော့ဘူး - အဲ့တော့ Result အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မေ့လျော့မှုက သေသေချာချာ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို အလေးမထားသလို ဖြစ်သွားရော - ဒါမျိုး မဖြစ်ရအောင် - Boomerang က ကာကွယ်ပေးပါတယ် - သူက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်လဲ ဆိုရင် -
အထက်မှာ ဖော်ပြထားသလို နောက်မှ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖော်ပြထားတဲ့ Mail တစ်စောင် ကိုယ့်ဆီ စောစီးစွာနဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အခါ - အဲ့ဒီ့ Mail ကို ကိုယ်အမှတ်တကယ် သိဖို့လိုအပ်တဲ့ အချိန် ချိန်းဆိုထားတဲ့ ရက်ရဲ့ ( ဥပမာ - တစ်ရက်ကြိုစောပြီး - တစ်နာရီ ကြိုစောပြီး ) စသဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်အသိပေးခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ကိုယ့်ဆီ ဝင်လာတဲ့ Mail ကို Schedule လုပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဝင်ခိုင်းတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့ -
လုပ်ဆောင်နည်း အကြမ်းမျဉ်းကို မိတ်ဆက်ပေးရရင် ကိုယ့်ဆီဝင်လာတဲ့ စာတွေထဲက နောက်တော့မှ ပြန်ဝင်လာစေချင်တဲ့ စာကို ဖွင့်ပြီး အထက်ပါပုံမှာ မြင်နေရတဲ့ နေရာကနေ တစ်ဆင့် နောက်တစ်နာရီမှလား - နှစ်နာရီမှလား - နောက် လေးနာရီလား - မနက်ဖြန် မနက်လား - ကိုယ့်ဘာသာ အချိန်သတ်မှတ်ချင်တာလား ( Ataspefic time ) ဆိုတဲ့ Options တွေထဲက တစ်ခုခု ကို ရွေးလိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ( Ataspefic time ) ကို ရွေးလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီအောက်ကပုံစံလေး အတိုင်း Schedule box ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ အသိပေးစေချင်တဲ့ ( နောက်တစ်ကြိမ် စာထက်ဝင်လာစေချင်တဲ့ ) အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။
ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ နောက်နေ့တွေမှာ ပို့စရာ ရှိနေတဲ့ စာတွေကို သတိရတဲ့ အချိန် ကြိုရေးထားပြီး Schedule နဲ့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ အချိန်မှ ပို့ခိုင်းထားလို့ လည်း ရပါသေးတယ်။
ဒီလို လုပ်ဆောင်ထားခြင်းအားဖြင့် ဘာကောင်းသွားလဲ ဆိုလျှင် မမေ့မလျော့ မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် Birthday wish တို့ ဘာတို့ကို အဲ့နေ့ ရောက်လို့ ကိုယ် သတိရတာ မရတာ အရေးမကြီးတော့ပဲ - လတ်တလော သတိရနေတဲ့ အချိန် ကြိုရေးထားပြီး Schedule လုပ်ထားခြင်း အားဖြင့် ဝတ္တရားပျက်ကွက်မှုတွေ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး - Mail က အချိန်တန်ရင် သူ့ဘာသာသူ ကိုယ် သတိရရ - မရရ ပို့ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
Boomerang ကို ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း သုံးနိုင်ဖို့ Extension ကို ဟိုးနောက်တစ်ဆင့်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် နေရာကနေ Install လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ Install လုပ်ဆောင်ပြီး သွားရင် Gmail ထဲကို ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ ခုလို မြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ Boomerang က Beta အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးလို့ နဲနဲ bug တာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ အတွက်တော့ ကို KznT ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး - ကျွန်တော့်စက်မှာ သုံးမရဘူးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ - ကျွန်တော်လည်း မဖြေရှင်း တတ်ပါဘူး - ကျွန်တော်က ဒီလိုလုပ်လို့ ရကြောင်း ဝေမျှတာပါ - အချိန်တန်ရင် bug တာတွေကို သူပြန်ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ် :D
Boomerang Extension ကို Firefox မှာ ဖြစ်ဖြစ် Google Chrome မှာဖြစ်ဖြစ် install လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဒီစာမျက်နှာကို သွားပါ။ ရောက်ရင် မြန်မာမိသားစုအတွက် Twitter ကနေ ကျွန်တော် သွားတောင်းထားတဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ invite code ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ( သူက မာနကြီးတယ်ဗျ - သူ့ Boomerang Extension ကို ဒီအတိုင်း ဒေါင်းလုပ်ချခွင့် မပေးဘူး - ကျွန်တော့်မှာ Twitter ကနေ ဝင်ပြီး သူ့ @baydinsoftware ကို follow လုပ်ရသေးတယ် နောက်ပြီး invitation code လေး ပေးပါဗျာ ဆိုပြီး Tweet က လုပ်ရသေးတယ် )
သူက အဲ့တော့မှ ကျွန်တော့်ကို invitation code ပြန်ပို့ပေးတာဗျ ဒီမှာသာကြည့် မာနတော်တော်ကြီးတဲ့ကောင် :D
ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေတော့ ဒါတွေ လုပ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး - ကျွန်တော် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ invitation code ကို အဲ့စာမျက်နှာ ဖြည့်ပြီး install လုပ်ဆောင်ယုံပါပဲ။ Firefox သုံးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ Firefox 3.6+ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော် လူလည်ကျထားတာ ရှိသေးတယ် - ချလို့ ရတုန်း တစ်ခါတည်း IDM နဲ့ ချပြီး ifile မှာပါ တင်ထားလိုက် တယ် - အဲတော့ တကယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေ အဲ့ စာမျက်နှာကို ဝင်မရတာ ဘာညာ ပြဿနာ ရှိလာရင် ဒီ ifile ကကောင်လေး ကို Download ချပြီး သက်ဆိုင်ရာ Browser မှာ install လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ video ကနေ ထပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲတော့ မိသားစုဝင်များ စမ်းသပ်ကြည့်လို့ ရပါပြီ
Different Types of Computer Viruses and Antivirus Software Analysis
8:04 PM LeaveaComment
ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော် ( အန်တီ Mod ) ဖြစ်တဲ့နေ့ 15-08-2010 က အမှတ်တရ အနေနဲ့ စရေးခဲ့တာပါ - ဒါပေမယ့် တစ်ခြား ဖိုရမ်က ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေ မေးမြန်းချက်လေးတွေ တစ်ဖက်ကနေ တတ်နိုင်သလောက် ဖြေရင်းနဲ့ ချက်ချင်း မတင်ဖြစ်ပဲ ဒီနေ့ထိ ရောက်လာခဲ့တာပါ။ စစချင်းတော့ ကျွန်တော် ပို့စ် အသစ်တင်ဖို့ထက် ပို့စ် အဟောင်းကိုပဲ ဆက်ရေးဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ - ဒါပေမယ့် အရမ်းပျော်နေတာ နဲ့ ပို့စ် အဟောင်း မရေးတော့ပဲ ( အန်တီ Mod ) ဖြစ်တဲ့နေ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ တစ်ခြား အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ရေးမယ်ဆိုပြီး ဒီအကြောင်းကို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Moderator ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တော်လို့ တတ်လို့ - ကျွန်တော် ကောင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော် မျှဝေခွင့် ရအောင် တည်ရှိပေးနေတဲ့ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် နဲ့ မြန်မာမိသားစုဝင်တွေ ဆိုတာ ရှိနေလို့ ဒီလို ရပ်တည်ခွင့် ရတာပါ - ဘယ်လောက်ပဲ လှူဒါန်းချင် လှူဒါန်းချင် အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် မရှိရင် ဒါန မမြောက်သလို - ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ပဲ ပေးချင်ပေးချင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို လိုချင်တဲ့ သူရှိမနေရင် KznT ဆိုတာလည်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး - အဲတာကြောင့် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသူ အားလုံး လည်ပတ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကျားကန်ကြိုးစားပေးခဲ့ကြသူ အားလုံး နဲ့ မြန်မာမိသားစုဝင်အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ အတိုင်းအဆမသိ ကျေးဇူး တင်နေမိပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ချင်ပါတယ်။
အဲတော့ Topic နဲ့ မဆိုင်တာ ရပ်ပြီး Topic နဲ့ ဆိုင်တာ စပါမယ် - Topic မစခင် မေးခွန်း တစ်ခု မေးကြည့်ချင်တာက မြန်မာမိသားစုဝင်တွေ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်း ဘယ်လောက်တောင်များ နားလည် ထားကြပါသလဲ - ဒီလို မေးခွန်းမေးလိုက်လို့ ကျွန်တော် က သူတို့နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အများကြီး သိနေခဲ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော့် မိသားစုဝင်တွေကို နေ့စဉ်နီးပါး တစ်ယောက် မဟုတ် တစ်ယောက်ကို ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့ ဒီ Virus တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် သိနားလည် ထားသလောက်လေး မျှဝေချင်လို့ပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် အဓိက Target ထားပြီး ပြောသွားမှာ malware အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး အကြောင်း နဲ့ သူတို့ ရန်ကို ဘယ်လို ကာကွယ် သွားမယ် ဆိုတာကို အလွယ်တကူ မှတ်မိသိရှိ လွယ်အောင် ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Malware ဆိုတာ ဘာလဲ ??
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာကို မရေးခင်တည်းက အင်တာနက်ထဲမှာ Virus အမျိုးအစားတွေ အကြောင်းကို ကိုယ်နားလည် သိရှိထားသလောက် ဝေမျှထားခဲ့ဖူးကြပြီးသား အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေတာ ကျွန်တော် သတိထားမိပါတယ် - ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားပေးသွားမှာပါ။ ခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက် ခေတ်မှာ Virus ဆိုတာ ရှိနေသေးပေမယ့် Virus ထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိုက်ခိုက်ခံလာရတာ Malware ပါ။ Malicious software ဆိုတာကို အတိုချုန်းထားတဲ့ Malware ဆိုတာဟာ တစ်ခြား လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ထဲက သတင်းအချက်အလက် တွေကို လူမသိ သူမသိ ခိုးယူဖို့ - သူများ ကွန်ပြူတာကို ဒုက္ခပေးဖို့ လှလှ ပပ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ viruses တွေ - worms တွေ spyware တွေ အားလုံးကို ယေဘုယျ အနေနဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးတည်း အဖြစ် ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ စာလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Viruses ဆိုတာ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ဆီးတယ်
ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း နားယဉ်နေကြတဲ့ computer virus ဆိုတာကို malware ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ထင်မှတ်မှားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ စကားလုံးနှစ်လုံးဟာ မဆင်တူပါဘူး - နဲနဲ အကျယ်ချဲ့ပြီး ရှင်းရရင် virus ဆိုတာမျိုးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပုံတူပွားပြီး ကွန်ပြူတာကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အမျိုးအစားပါ - ဆိုရရင် သူက ဝင်လာတုန်းက တစ်ကောင်တည်း ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Copy ပြန်လုပ်ပြီး file တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ကူးတယ် - နောက် Copy နဲ့ Share လမ်းကြောင်းတွေကနေ တစ်ဆင့် စက်တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ဆက်ဖြန့်တယ် - နောက် viruses အများစုဟာ တစ်ကိုယ်ရည် တစ်ကာယ ရပ်တည်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ executable files အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ master boot record အဖြစ် နောက် autorun scripts - MS Office macros နဲ့ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာဆိုရင် arbitrary files တွေ အဖြစ်လည်း တည်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို စီစဉ်ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ Programmer ရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ ရည်ရွက်ချက်ကို လိုက်ပြီး Target တွေလည်း မတူညီကြပါဘူး -
Viruses တော်တော်များများ - အထူးသဖြင့် CIH လိုမျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲက ဖိုင်တွေကို တစ်စုံတစ်ယောက် က ဖျက်ပစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ System တစ်ခုလုံး လုံးဝ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်လို့ မရတော့လောက်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ Virus မျိုး ဖြစ်ပါတယ် - အဲတော့ ကျွန်တော် အဓိက Target ထားပြီး ပြောချင်တာ virus ဆိုတာမျိုးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ System ကို ကိုယ့်ရဲ့ ချုပ်ထိန်းမှု အောက်မှာ မရှိတော့ပဲ အဲ့ဒီ့ Program က ညွှန်ကြားတဲ့ ခိုင်းစေချက် အတိုင်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်စေတဲ့ အဖျက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ။
အလွယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင် Viruses ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် Latest definitions ကို အမြဲတမ်း Update ပေးထားတဲ့ antivirus application ကို အသုံးပြုပါလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် - ဒါပေမယ့်လည်း ဒါတစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ချို့က Viruses ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ Antivirus ရှိရင် ရတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်စက်မှာ Antivirus တင်ပြီးတာနဲ့ စိတ်ထင်ရာ လျှောက်ဝင်ကြ - ဥပမာ Porn sites - Keygen/Crack Sites - နောက် တွေ့ကရာ USB Stick ထိုးကြ - Privacy ဆန်ဆန် သုံးသင့်တဲ့ ကိုယ့် Flash Drive - External HD ဆိုတာကို စေတနာ ကောင်းကောင်းနဲ့ သူများတကာကို ဌားကြ - ကိုယ့်ဆီ ပြန်လာတော့ Virus ပါလာတာ ကိုယ်က မသိ - အဲတာကို စက်မှာတပ်သုံး - မြင်သမျှ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖိုင် - ဥပမာ - New Folder ဆို " ဖိုဒါလေးက အခုမှ Create လုပ်ထားတာဟ - အသစ်လေး ဘာလေးများ ထည့်ထားမလဲ " ဆိုပြီး စပ်စု - စသဖြင့် ဆင်ခြင်မှုနဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်မှုကို အရင်မလုပ်ပဲ စပ်စုလိုစိတ်ကို ရှေ့တန်းတင် လုပ်ဆောင်နေမယ် ဆိုရင်တော့ antivirus application ကို Latest definitions နဲ့ အမြဲတမ်း Update ပေးပြီး သုံးနေလည်း Virus ကတော့ ကိုက်ခံ ရမှာပါပဲ - သိထားဖို့ တစ်ခုက Latest definitions ဆိုတာ ဒီ Virus ရှိတယ်ဆိုတာ သိတော့မှ Programmer တွေက ဖြေရှင်းနည်းကို ရေးကြတာ မျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့် Latest definitions ဆိုတာ နောက်ဆုံးပေါ် Virus ကို ဘယ်သော အခါမှ သတ်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး - ဒါကို ကျွန်တော်တို့နားလည် ထားဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖိုင်တစ်ခုခုကို Run တော့မယ် ဆိုတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ filename ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပါ။ သူ့ Extensions ကို သေသေချာချာ လေ့လာပါ - ဆိုလိုတာ mp3 လား .mp3.exe လား ဒါမျိုးတွေ သတိရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Antivirus ကို Latest definitions နဲ့ အမြဲတမ်း Update ပေးပြီး သုံးနေယုံတင် မဟုတ်ပဲ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ သုံးစွဲနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက် လမ်းကြောင်း - နောက် ပြင်ပက Share လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်စက်ကို လာရောက်ပတ်သတ်မယ့် Activities တွေကိုပါ လုံခြုံရေး အသိနဲ့ စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Spyware ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာတွေကို ခိုးယူတယ်
နောက် အကြောင်းအရာ တစ်ခုက Spyware ! သူ့ကိုတော့ တော်တော်များများ ကြားဖူးနားဝရှိပြီး ရင်းနှီးကြပါတယ်။ Spyware ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ installed လုပ်ခံ ထားရပြီး ကိုယ် မသိလိုက်တဲ့ - မသိနိုင်တဲ့ သတိမထားမိခင် အချိန်မှာ ကိုယ့် စက်ထဲမှာ ရှိနေတ့ဲ ကိုယ့်ရဲ့ information ( အကြောင်းအရာ သတင်းအချက်အလက် ) တွေကို နောက်ကွယ်ကနေ Spyware ထုတ်လုပ်သူထံ တိတ်တဆိတ် ပြန်ပို့ပေးနေတဲ့ Software အမျိုးအစား တစ်မျိုးကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ information ကို ကိုယ်မသိအောင် ခိုးယူတယ် ဆိုမှတော့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကျိုးပေးဖို့ထက် ဆိုးကျိုးပေးဖို့သာ ပိုများမှာပါ - Spyware မှာ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးတွေ ပါလဲ ဆိုရင် တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ Websites အဝင်အထွက်တွေမှာ ရိုက်သွင်းရလေ့ ရှိတဲ့ passwords ပြောင်းလဲမှုတွေကို နောက်ကွယ်ကနေ မှတ်သားတဲ့ keylogging စနစ်တွေ - နောက် ကိုယ် အင်တာနက်ထဲမှာ ဘာတွေ ရှာတတ်သလဲ - နောက် ကိုယ်သုံးနေကျ browser home page ပြောင်းပစ်တာမျိုး - URL တစ်ခုခုကို ရိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တောင်းဆိုမထားတဲ့ တစ်ခြား Web စာမျက်နှာ တစ်ခုကို ရောက်သွားအောင် လုပ်ဆောင်တာ စသဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလိုမျိုး ဘာမှန်း ညာမှန်းမသိ toolbars တွေ အတင်း install လုပ်ခိုင်း - ကိုယ့် passwords နဲ့ credit card numbers ကိုခိုး စသဖြင့် - မျိုးစုံအောင် လည်း လုပ်ဆောင် တတ်ကြပါတယ်။
Spyware တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကိုခိုးယူပြီး အဲကနေမှ တစ်ဆင့် ငွေရပေါက် တစ်ခု သူတို့ ဖန်တီးချင်တာမျိုးမို့လို့ Spyware ဆိုတာမျိုးက ဘယ်တော့မှ ကွန်ပြူတာကို သုံးစား မရတော့လောက်အောင် ပြဿနာ ပေးတတ်တဲ့ Software မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး — တကယ်တော့ လူတော်တော်များများရဲ့ စက်မှာ spyware တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခု နောက်ကွယ်ကနေ Run နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ မသိကြတာ များပါတယ်။ Spyware application တစ်ခု တစ်လေလောက် ရှိတာမျိုးက စက်ထဲမှာ ဘာမှ အရေးတကြီး ထည့်ပြီး မှတ်ထားလေ့ မရှိတဲ့ လူမျိုးတွေ အတွက် သိပ် ပြဿနာ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် မရှိလှပေမယ့် ဒီလို spyware application တွေ တစ်ခုထက်မက installed လုပ်ခံရတာ များလာတဲ့အခါ နောက်ကွယ်ကနေ Spyware အများအပြားရဲ့ စောင့်ကြည့် သတင်းပို့ချင်း ခံရတဲ့ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးရဲ့ ဘဝမျိုး ရောက်သွားနိုင်တာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာက နှေးသထက် နှေးသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါတင်မက လူတော်တော်များများက Antivirus ရှိရင် အားလုံး ပြီးတယ်လို့ ထင်နေကြတာလည်း မှားပါတယ်။ Antivirus တိုင်းဟာ Spyware ကို မဖမ်းနိုင်ကြသလို သတ်ဖို့လည်း မစွမ်းဆောင်နိုင် ကြပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် Software တစ်ခုခု ကို install လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အရင်ဆုံး လေ့လာသင့်တာ ဒီ application ကို ဘယ်ကထုတ်လဲ - သူတို့ ဘာတွေ အာမခံချက်ပေးလဲ - ဒါမျိုးတွေ လေ့လာပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ် - စိတ်ခံစားမှုနဲ့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ကောင်းတယ် အထင်နဲ့ အမှတ်မှားပြီး မသုံးစေချင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကိုယ့်စက်မှာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေ အတိုင်း ဖြစ်နေမယ် - စက်ကလည်း ထင်မှတ်မထားရလောက်အောင် လေးလံနေမယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက Spyware ရှိမရှိ စစ်ဆေး လိုက်ဖို့ပါ။ Spyware ရှင်းဖို့ ဘယ် Software သုံးသင့်မလဲ ဆိုရင် MalwareBytes နဲ့ SuperAntiSpyware ကို ပေါင်းသုံးပြီး စစ်ဆေး ရှင်းလင်းစေချင်ပါတယ်။
Scareware ဆိုတာ ဘယ်လုပ်ရမှန်း မသိအောင် အကျပ်ကိုင်တယ်
ခြိမ်းခြောက်တာ အကျပ်ကိုင်တာမျိုးကို လူတော်တော်များများ မုန်းကြပါတယ် - ကျွန်တော်လည်း မုန်းတယ် - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အကျပ်ကိုင်တယ်ဆိုကတည်းက ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ဆိုတာ မရှိဘူး - သူဖြစ်ချင်တာကို ကိုယ့်ဘက်က လိုက်လျောအောင် အတင်းအဓမ္မ မဖြစ်မနေ တောင်းဆိုတာမျိုး မို့လို့ပါ။ Scareware ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ - ခုနောက်ပိုင်း ဒီတိုက်ခိုက်နည်းက တော်တော်လေး ခေတ်စားလာတဲ့ တိုက်ခိုက်နည်းပါ။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ ဥပမာပြောရရင် တစ်ချို့လည်း တွေ့ဖူးရင် တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ site တစ်ခုခုကို သွားရင်းနဲ့ နေရင်းထိုင်ရင်း antivirus application လိုလို ဘာလိုလို Spyware စစ်ပေးတာလိုလို ဘာလိုလို ပေါ်ချလာပြီး မင်းကွန်ပြူတာမှာ virus တွေ ရှိနေနိုင်တယ် - သေချာသွားအောင် ငါ့ရဲ့ free scan နဲ့ virus စစ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီး recommend ပေးလာရော - ကိုယ်တွေကလည်း free scan ဆိုတော့ အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ ကောင်းတယ်ပေါ့ - အလကားရတာပဲ စစ်မယ်ဆိုပြီး OK ပေးလိုက်တယ် - အဲ့မှာ ပြဿနာ စတာပဲ - အဲ့ဒီ့ Applications က ကိုယ်က OK/Agree ဆိုတာမျိုး ပေးလိုက်တာနဲ့ သူ့ဘာသာ နေရင်းထိုင်ရင်း Download တွေချ - Install တွေလုပ် Scan တွေဖတ် နေလုပ်နေပါလေရော - နောက်ခဏလောက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာတော့ဖြင့် virus ကတော့ ဘယ်နကောင် - Spyware ကတော့ ဘယ်နရာ စသဖြင့် ပြ - နောက်ပြီး သူ့ Software နဲ့ ရှင်းပေးထားတာ Spyware ဘယ်နကောင် တော့ဖြင့် သေသွားပြီ - ဒါပေမယ့် ဒါက trail version မို့လို့ အကုန်တော့ ရှင်းမပေးနိုင်ဘူး - အကုန်ရှင်းပစ်စေချင်ရင် full license ကို ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ဆိုပြီး အကျပ်ကိုင်လာပါလေရော ( ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် သူက free scan လုပ်ပေးမယ်ပဲ ပြောတာ တွေ့ရင် ရှင်းပေးမယ်လို့ ပြောထားတာမှ မဟုတ်တာ ) - တစ်ချို့ကျတော့ virus ဆိုကြောက်တာပဲ သိတယ် - ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးကို မကြုံဘူးတော့ ဟာသွားပါပြီ - ငါ့စက်မှာတော့ virus တွေ မနည်းပါလားဆိုပြီး သူတောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးပြီးဝယ်ကြ ပြုကြ ရှင်းကြ စသဖြင့် - တကယ်တမ်း ဟုတ်လားဆိုတော့ ဘာမှမဟုတ် - ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပိုက်ဆံကတော့ ပါသွားပြီ - ဒါတွေက scareware applications တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Scareware တွေရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ တစ်ချက်က သူတို့ကိုကိုယ်က စက်ထဲမှာ တစ်ခါ install လုပ်လိုက်မိတာနဲ့ သူတို့ တောင်းတဲ့ ပိုက်ဆံကို မပေးမချင်း တစ်ချိန်လုံး Alarm တွေတက် - လူကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင်လုပ် - ဒါတင်မက တစ်ချို့ အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် သူ့ကို ပြန် uninstall လုပ်လို့ မရယုံတင်မက စက်ပါသုံးလို့ မရတော့လောက်တဲ့ အခြေအနေထိ ဖြစ်အောင် သူက လုပ်ဆောင်ပစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလို အကျပ်ကိုင်မှုမျိုး ဒီလို Scareware မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာရပြီ ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက Google Search box မှာ ကိုယ့်စက်မှာ ဝင်နေတဲ့ Scareware ရဲ့ နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါ။ အဲ့ကနေတစ်ဆင့် တွေ့ရှိလာရတဲ့ အထူး ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်ပြီး တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ဒီ Scareware ကို ဘယ်လို ဖျက်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်လေ မှာ သီးသန့်ညွှန်ကြားချက် ဆိုပေမယ့် လမ်းညွှန်သူ တော်တော်များများ ကလည်း တစ်ယောက်ဖော်ပြချက်ကို တစ်ယောက် ကိုးကားဖော်ပြကြတာပဲ များပါတယ်။ ဒီလို Scareware ပြဿနာ တက်လို့ Google မှာ မေးလိုက်ရင် အများဆုံး ရတတ်တဲ့ အဖြေက MalwareBytes - SuperAntiSpyware နဲ့ လိုအပ်မယ်ဆို ComboFix ကို ပေါင်းပြီး run ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့နည်းကပဲ ပြဿနာရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများကို ပြေလည်စေတာ လည်း အမှန်ပါပဲ။
Trojan Horses ဆိုတာ နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်တယ်။
ထရိုဂျင်မြို့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာလည်း သင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက် ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ် ဆိုတဲ့ ထရိုဂျင်မြို့ကြီးထဲကို သစ်သားမြင်းရုပ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ ပရိယာယ်ဆင်ပြီး ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရန်သူစစ်သားတွေ အကြောင်းကို သမိုင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ် အနေနဲ့ တည်ရှိနေခဲ့ရာကနေ ခု မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံအသီးသီးက ကိုယ်လက်လှမ်း မမှီနိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာတွေကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နိုင်ဖို့ Trojan horses ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ပဲ နောက်ထပ် ထရိုဂျန် တစ်မျိုး ပေါ်ထွက်လာပြန်ပါပြီ - သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ဖက်က ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူ မသိလိုက်ခင်မှာ သူ့ကွန်ပြူတာထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး နောက်ကွယ်ကနေ ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရည်ညွှန်းချင်တာပါ။ Trojan horses ဆိုတာ applications တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်က ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူ user ကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာရပ်တော်တော်များများမှာတော့ trojans ဆိုတာ သမိုင်းပုံပြင် ထဲကအတိုင်း ကိုယ်မသိလိုက်ခင် တစ်ဖက်လူကို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကြိုက် ထိိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်လို့ ရအောင် နောက်ကွယ်ကနေ လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်။
Virus နဲ့ Trojan ရဲ့ကြားမှာ အဓိက ကွာခြားသွားတဲ့ တစ်ချက်က trojans တွေဟာ viruses တွေလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် replicate မလုပ်နိုင်တာပါ - သူတို့တွေကို များသောအားဖြင့် ဘုမသိ ဘမသိ စာတမ်းတစ်ခုခု တက်လာရင် စာကို မဖတ်ပဲ Yes ပေးတတ်တဲ့သူ - အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကျွမ်းတဝင် မရှိသေးသူ - Security နည်းတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ install လုပ်ဆောင်မိရာကနေ ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲကို ဝင်ရောက်ခြင်း ခံရတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ trojan ဝင်ရောက် ကိန်းအောင်းခံရပြီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာဟာ ကိုယ့် ရည်ရွယ်ရာကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပဲ ကိုယ်မလိုအပ်တဲ့ မလိုလားတဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက် - ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုရဲ့ အသုံးချခံ ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲ ဆိုရင် Denial of service (DoS) attack လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ computer resource ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တော့ပဲ web site တွေနဲ့ Service တွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက အသုံးချခံလာရပါတယ် - နောက် ဒီ့ထက်ဆိုးတာ တစ်ခုက Spam ပို့လွှတ်ရာ ဌာန တစ်ခုလို အသုံးချခံရတာပါ။ ဒီလို ပြဿနာတွေကို ဖန်တီးနေတဲ့ trojans ဆိုတဲ့ အကောင်ကို ဖြေရှင်းတားဆီးဖို့အတွက် နည်းလမ်းက ကျွန်တော်တို့ Viruses တားဆီးတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ရမှာတွေက antivirus application ကို up to date ဖြစ်အောင်ထားရမယ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ mails တွေက attachments တွေကို မဖွင့်ကြည့်ခင်မှာ သတိထားပြီး စစ်ဆေးရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖွင့်ကို မဖွင့်ပဲ Delete ပစ်တာ ကောင်းတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဝေမျှနေတဲ့ keygen တို့ crack file တို့ ဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးတာမျိုး မလုပ်ပဲ ဘယ်သူတွေ သုံးဖူးလဲ - သူတို့ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လည်း ဆိုတာလေ့လာပြီးတော့မှ သုံးစေချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ keygen တို့ crack file တို့ ဆိုတာ မသုံးပဲ နေနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Worms ဆိုတာ Network ကနေ ကူးစက်ခံရတယ်။
Computer worms ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်ကိုယ် သူတို့ copy ပွားပြီး network လမ်းကြောင်းကနေ တစ်ဆင့် တစ်ခြား ကွန်ပြူတာကို ကူးစက်တဲ့ အမျိုးအစားပါ။ နောက်ပြီး Worms တွေဆိုတာ network ကိုသုံးပြီး ပြန့်ပွားတာမျိုး မို့လို့ ခဏချင်းနဲ့ ပြန့်နှံ့လွယ်ပြီး လူသိလည်း များစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကို ကျွန်တော်တို့တွေက viruses နဲ့ အထင်မှားလေ့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ သိကြတဲ့ worms အမျိုးအစားထဲက ဥပမာပေးရမယ် ဆိုရင် ILOVEYOU worm - သူက email attachment ကနေ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ တန်ဖိုးငွေ ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ငါးထောင့် ငါးရာ လောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက် Code Red worm ဆိုရင် web sites ပေါင်း သုံးသိန်းခွဲကျော် ဖျက်ဆီးခဲ့တယ် - နောက် SQL Slammer က internet traffic တွေကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ နှေးကွေးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် - နောက်ဆုံး Blaster worm ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာကို ခဏခဏ Restart ပေးရအောင် ခိုင်းစေခဲ့တယ် - ဒါတွေက Worms တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် သမိုင်းပါ။
Worms တွေဟာ Network နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Security ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် တာမို့လို့ သူ့ကို ကာကွယ်မယ် ဆိုရင် firewall နဲ့ ပေးထားဖို့ antivirus software ကို ပုံမှန် Update ပေးပြီး သုံးဖို့ စသဖြင့် လိုအပ်ပါတယ်။
အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် များများလည်း သတိထားမိပြီ - ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Concepts လေးလည်း ချိတ်မိပြီ - ဒါပေမယ့် မပြီးသေးပါဘူး - နောက်ထပ် သိထားသင့်တာလေးတွေ ကျန်ပါသေးတယ် - အဲ့ဒီ့ အကြောင်းအရာကိုတော့ နောက်နေ့ ဆက်ပါ့မယ်။
ဒီနေ့ ဒီအကြောင်းကို ကိုအောင်လွင်ဦး မေးခွန်းလေးနဲ့ ဆက်သွားလိုက်ပါ့မယ်။
အေးဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း တစ်ခုကူညီပါဦး။ ကျွန်တော် က Kav2011 လိုင်စင်နဲ့သုံးပါတယ်။ နေ့စဉ် Update လုပ်ပြီး အမြဲ Update ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့ရဲ့ Kav11 က ရှိသမျှဖိုင်တွေမှာ Email-Worm.Win32.Runouce.b ရှိနေတယ် လို့ပဲပြောနေတယ်။ Email-Worm.Win32.Runouce.b ကကွန်ပျူတာကို ဘာဒုက္ခမှမပေးပါဘူး။ အစကတော့ သူပြောတဲ့ Email-Worm.Win32.Runouce.b ကို Disinfect လုပ်လည်းမရ၊ Delete လုပ်လည်းမရ၊ Ignore လုပ်လည်းမရတာနဲ့ အဲဒီဖိုင်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဖျက်လိုက်တော့ နောက်တစ်ဖိုင်မှာရှိတယ်ထပ်ပြောတယ်။ သူပြောတိုင်းသာ လိုက်ဖျက်နေရရင် တော့ စက်ထဲရှိသမျှဖိုင်ကုန်သွားမယ်။ နောက်ဆုံး Kav11 ကို ဖျက်မှပဲ ကိစ္စပြီးတော့မယ်ထင်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုအောင်လွင်ဦး - ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလိုပဲ MalwareBytes - SuperAntiSpyware ကို သုံးပြီး စမ်းကြည့် စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရမရတော့ ကျွန်တော်လည်း သိပ်တော့ မသေချာပါဘူး - ဒါပေမယ့် ဖြေရှင်းလို့ ရကောင်းရနိုင်မယ့် နောက်နည်းလမ်း တစ်မျိုးတော့ ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကို ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြမယ့် အပေါ် Topic က အဆက်ကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါ - နောက်ဆုံး ဘယ်လို ဖြေရှင်းလို့ရမှန်း အဖြေမထွက်ရင်တောင် နောက်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာ အတွေးတစ်ခုလောက်တော့ ရနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဟိုတစ်နေ့က viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms တွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော်တော် များများ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုလည်း ကိုအောင်လွင်ဦးက မေးပြီ Email-Worm တစ်ခုအကြောင်း - မှန်ရာပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း Email-Worm.Win32.Runouce.b ဆိုတာနဲ့ မရင်းနှီးဘူး - တစ်ခါမှလည်း အဝင်မခံခဲ့ရဘူးသလို တစ်ခါမှလည်း Email-Worm.Win32.Runouce.b နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြေရှင်းမပေးခဲ့ဖူးဘူး - ဒါပေမယ့် viruses, spyware, scareware, trojans, နဲ့ worms ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲ စက်ထဲကို ဝင်ဝင် - ကျွန်တော်တို့ အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တာ သက်ဆိုင်ရာ antivirus ကို Update ပေးပြီး Fullscan run ဖို့ - နောက် မရသေးရင် အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ MalwareBytes - SuperAntiSpyware ဆိုတာတွေ သုံးပြီး စစ်မယ် - အဲတာမှ မရသေးရင် အင်တာနက်ထဲ ကိုယ့်လိုမျိုး ဘယ်သူတွေ ဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖူးပြီလဲ Google ကနေ လိုက်ရှာမယ် - သူတို့ရှာတွေ့ထားတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးတွေ နဲ့ လိုက်စမ်းကြည့်မယ်။ ဒီအဆင့်တွေ အကုန်လုံးက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အဆုံးစွန်ဆုံး ဖြေရှင်းနည်းပါပဲ -
အဲတော့ ဟုတ်ပြီ - ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းတွေက ရချင်လည်း ရမယ် - ရချင်မှလည်း ရမယ် - ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ် မဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဥပမာကနေ အဖြေထုတ်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေက ကွန်ပြူတာသုံးရင် Antivirus သုံးရမယ် ဆိုတာ လူတိုင်း အခြေခံအားဖြင့် သိတယ် - ဒါပေမယ့် ကိုယ်သုံးတဲ့ Antivirus ဆိုတာ Products တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်း လေ့လာဖို့ စိတ်မဝင်စားကြသလို - သက်ဆိုင်ရာ Antivirus ကုမ္ပဏီ အသီးသီးက ထုတ်တဲ့ Antivirus Products အသီးသီးရဲ့ ကွဲပြားခြားနားပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အကြောင်းကိုလည်း လေ့လာဖို့ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကြဘူး - တစ်ချို့ကတော့ ဒီလိုရှိတယ် ဆိုတာကို မသိတာ - အဲတော့ ကျွန်တော် လောလောဆယ် Kaspersky Lab ကနေ ထုတ်တဲ့ Kaspersky Products တွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို အကျဉ်းမိတ်ဆက် ပေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ Kaspersky လို့ ပြောလိုက်ရင် တစ်ချို့က Kaspersky Antivirus ကိုပဲ သိကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Kaspersky မှာ Kaspersky Antivirus - Kaspersky Internet Security ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိတယ် ဆိုတာလောက်ထိ သိကြတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Kasperky Pure ဆိုပြီး ထပ်ပေါ်နေတာ တော်တော်များများ ဘယ်သူမှ မသိကြသေးဘူး - သိတဲ့သူလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ Norton - အဲမှာ လူတော်တော်များများက Norton မှာ Norton™ AntiVirus ရှိတာသိကြတယ် - တစ်ချို့ကတော့ Norton မှာမှ Norton™ Internet Security နဲ့ Norton™ AntiVirus နှစ်မျိုး ရှိတယ် ဆိုတာလောက်ထိ သိကြတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ထပ်ပေါ်လာတဲ့ Norton 360™ Version ဆိုတာကိုကျ တော်တော်များများ မသိကြတော့ဘူး -
Internet Security နဲ့ Antivirus ဘာကွာသလဲ ??
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ဒီ Products တွေ ရှိနေတာကို သိတာ မသိတာကို အဓိက ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီ Products တွေ ရှိတာ သိပြီ - ဟုတ်ပြီ - ဒါပေမယ့် အဲ့ Products တွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘာကွာလဲ ?? ဆိုလိုတာ Kaspersky Antivirus နဲ့ Kaspersky Internet Security မှာ Kaspersky Antivirus က ဘာလုပ်ပြီး - Kaspersky Internet Security က ဘာတွေ လုပ်လဲ ?? ဘယ်ကောင်က ဘာအတွက်သုံးပြီး ဘယ်ကောင်က ဘယ်လိုလူမျိုးအတွက် ပို အသုံးတည့်သလဲ ?? ဘယ်လို စက်မျိုးမှာ ဘယ် Products ကို ပိုသုံးသင့်လဲ ?? ဒီထူးခြားချက်တွေကို စဉ်းစားခဲ့ကြဖူးပါသလား ?? သိတဲ့သူလည်း ရှိမယ် - တစ်ချို့ကျ ဒါကို သိပ် အလေးထား မစဉ်းစားကြဘူး - Antivirus တင်ဆို တွေ့ရာ Antivirus တစ်ခု ကောက်တင်လိုက်ရင် တာဝန်ကျေပြီ ဆိုပြီး ထင်ကြတယ်။ ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက် ရှိတယ် - မြန်မာနိုင်ငံမှာ - တစ်ချိန်လုံး သူ့စက်က Virus ပတ်ကိုက်ခံနေရတာ - ဘာ Antivirus သုံးလည်း မေးရင် ကြုံတာ သုံးတယ် - Update ဆို ဘယ်တော့မှ မပေးဘူး - ၂ လတစ်ခါလောက်ပဲ သူပေးတယ် - သူက Kaspersky သမား - Kaspersky Antivirus နဲ့ Kaspersky Internet Security ဘယ်ဟာသုံးလဲ မေးရင် သူနားမလည်ဘူး - ဘာကွာမှန်းလည်း မသိဘူး - သူတို့နှစ်ခု Antivirus ချင်း တူတူပဲ မဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြန်မေးတယ် - ဒါ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ပါ။
Antivirus သုံးမယ်သူ တစ်ယောက်က ဒီလို မဖြစ်သင့်ပါဘူး - ကိုယ်သုံးမယ့် Antivirus မှာ Products ဘယ်နမျိုးရှိသလဲ ?? သူတို့တွေက ဘာကွာသလဲ - ကိုယ်က ကွန်ပြူတာကို အလှသုံးတာလား ?? ဒါမှမဟုတ် တွေ့သမျှ Websites အကုန်ဝင် - ထွက်သမျှ Software အကုန်တင် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးတာလား ?? ကိုယ့်စက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လတ်တလော ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Antivirus ကတောင်းတဲ့ System Requirements နဲ့ကရော ကိုက်ရဲ့လား - ဒါမျိုးလေးတွေ Antivirus တစ်ခု ကိုယ့်စက်ထဲ မတင်ခင်မှာ စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့ Kaspersky Internet Security မှာဆိုရင် Kaspersky anti-virus မှာမပါတဲ့ features တွေ တော်တော်များများ ပိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် virtual keyboard - Blocks spam - Detects rootkits - Blocks Malicious changes to Applications - Built in Intrusion Prevention System နဲ့ နောက် Worm တွေရန်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နှစ်ထပ်ကာရံ firewall system - ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်က ကွန်ပြူတာကို အလှသုံးတာ မဟုတ်ဘူး - တွေ့သမျှ Websites အကုန်ဝင် - ထွက်သမျှ Software အကုန်တင် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးတတ်တယ် - Email Attachments တွေလည်း မကြာခဏ လာလေ့ ရှိပြီး သူတို့တွေနဲ့လည်း မပြတ်တမ်း ပတ်သတ်နေရတယ် - နောက်ပြီး ကိုယ့် Network ကလည်း သိပ်လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိဘူး ဆိုရင် Kaspersky anti-virus သုံးမယ့် အစား Kaspersky Internet Security သုံးသင့်ပါတယ်။ Kaspersky Internet Security Suite က ကျွန်တော်တို့အတွက် လိုအပ်သမျှ security ကို ဘက်စုံထောင့်စုံကနေ နောက်လှည့်ကြည့်စရာ မလိုပဲ သူက ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Kaspersky Internet Security ထက်ကောင်းတာ ဆိုရင် သူ့နောက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ Kasperky Pure ! သူတို့တွေရဲ့ အသေးစိတ် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ security နိှုင်းယှဉ်ချက်တွေကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲတော့ မေးစရာ တစ်ခု ပေါ်လာတယ် - Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure က ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင် Kaspersky anti-virus က ဘာလို့ ထုတ်နေရသေးတုန်း - လူတိုင်းက Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ပဲ ပိုသုံးကြတော့မှာပေါ့လို့ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။ အဲလိုလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး - Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ဟာပိုကောင်းတာ မှန်ပေမယ်လို့ သူတို့တွေမှာပါတဲ့ features တွေ security တွေ ကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့် System Resources ကို ပိုပြီး သုံးလာတတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure တို့ သုံးမယ် ဆိုရင် Hardware performance ကောင်းတဲ့ Computer တွေမှာ ဘာမှ သိပ်မသိသာပေမယ့် - Hardware performance နိမ့်တဲ့ Computer မျိုးတွေမှာ စက်ကြီးက အထနှေး အထွက်နှေး ဖြစ်လာမယ် - Applications တစ်ခုခု ဖွင့်ရင် Loading လုပ်တာ ကြာလာမယ် - Windows အတက်တွေမှာ တော်တော်ကြီး နှေးသွားမယ် - ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါမယ်။ နောက်ပြီး Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ဆိုတာမျိုးက ကွန်ပြူတာကို အလှသုံးတဲ့ သူမျိုးတွေ - ဆိုလိုတာ အိမ်မှာ Laptop ထားထားပြီး Internet လည်း မရှိ - Network လည်း မသွယ် - တစ်နေ့နေလို့ အလုပ်ပြန်လာမှ တစ်ခါလောက်ဖွင့်ပြီး စာစီစာရိုက်လောက် လုပ်တဲ့ ကွန်ပြူတာမျိုးတွေမှာကျတော့ သုံးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး - အဲလို ကွန်ပြူတာမျိုးတွေမှာက Kaspersky Internet Security နဲ့ Kasperky Pure ကိုသုံးတာမျိုးထက် Kaspersky Antivirus လေးတင် တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် Update ပေးပြီး သုံးတာ ပိုပြီး စက်ပေါ့သလို သုံးရတာလည်း သွက်စေပါတယ်။
ဒါက Kaspersky နဲ့ နိှုင်းယှဉ်ပြီး Antivirus Products ရွေးချယ်ပုံကို ပြောပြတာပါ။ တစ်ခြား Kaspersky မဟုတ်တဲ့ Antivirus Products တွေလည်း ခုလို သဘောအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် Norton - သူ့မှာလည်း Norton Internet Security က Norton AntiVirus ထက်ပိုပြီး firewall တွေ spyware protection တွေနဲ့ Security ပိုကောင်းပါတယ်။ Norton Products တွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် နိဂုံးချုပ် အကြံပြုချင်တာက Antivirus Products တွေကို ကိုယ်သုံးမယ့် Field နဲ့ ယှဉ် - Hardware လိုအပ်ချက်နဲ့ ချိန်ညှိပြီး ရွေးသုံးပါ - ဒီလိုဆို ဘယ် Internet Security - Antivirus ပဲ သုံးသုံး စက်က ပေါ့ပါးနေမှာ ဖြစ်သလို - Security ပိုင်း ဆိုင်ရာလည်း အားသာချက်တွေ ရရှိပြီး Virus ဆိုတဲ့ရန်ကနေ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မြင့်မားမားနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲတော့ ကိုအောင်လွင်ဦးကို တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း အကြံပြုခဲ့ချင်တာ Kaspersky Antivirus အစား Kaspersky Internet Security ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါလို့ -
Different Types of Computer Viruses and Antivirus ...
Send Your Files Quickly and Securely
How to Set BIOS to Boot from CDROM
Moderator of MyanmarFamily
Wireless LAN Architecture and Wireless adapter con...
Top 20 Facebook Apps
Wolfram Alpha for Everyone
Useful Tips for Gtalk Users
Chit Thu Wai - Big Mistake
Recycle Bin and & System Volume Information
Hard Drive Makes Clicking Sounds
Juu - Short Stories
Shares Multiple URLs withaSingle Link